Dhalashada Muwaadinimada Mareykanka (U.S.) Cadeynta Muwaadinimada Ilmahaaga | LawHelp Minnesota
Dhalashada Muwaadinimada Mareykanka (U.S.) Cadeynta Muwaadinimada Ilmahaaga
Proving Your Child's Citizenship (PDF)523.88 KB
Hadii aad tahay waalid caruur haysta oo aad qaadatid dhalashada Maraykanka, xaaladaha qaarkood caruurtaada aan haysan dhalashada Maraykanka iyagana waa la siinayaa. Xaaladan waxaa lagu magacaabaa caruurta “waalidkood ku qaatay” dhalashada. LAAKIIN weli waxaad u baahan tahay inaad dalbatid aqoonsiga sida warqadda dhalashada ama dal-ku-galka (passport), si’aad u CADAYSID in ilmahaagu dhalashada haysto. Xogtan urursani waxay ku siinaysaa macluumaad ah sidii aad ku heli lahayd aqoonsiyadaas.
Xogtan arrursan ee ku qoran warqadani kuma siinayso macluumaad ku saabsan sidii aad aqoonsiga dhalashada ugu heli lahayd caruurta ku dhalatay Maraykanka gudihiisa, caruurta waalidkood dhalashada Maraykanka haysto ee ku dhashay wadanka Maraykanka dibadiisa, ama caruurta ay soo korsadeen dadka dhalashada Maraykanka haystaa.
Xogtan aruursan ee ku qoran warqadani waxay ka hadlaysaa foomamka aad ka heli kartid barta internetka. Hadii aadan kombuyuutar haysan, waxaad isticmaali kartaa kombuyuutada yaala maktabadda dadwaynaha. Sidoo kale waxaad wici kartaa hay’dda magaceedu meesha ku qoran yahay waxaanad ka codsan kartaa inay foomamka kuu soo diraan.
Marka Waalidku dhalshada qaataan caruurtooduna shuruud la’aan miyay dhalashada helayaan?
Waxaa laga yaabaa in Ilmuhu dhalashda Maraykanka haysto hadii uu DHAMAAN waxyaabahan soo socda uu hadda ama hore u kulansaday:
Hadii ilmaha da’diisu ka yar tahay 18 sano.
Hadii ilmuhu haysto sharciga (deganaanshaha rasmiga ah) ee Maraykanka (green card)
Hadii ugu yaraan labada waalid mid ka mid ahi uu Maraykanka ku dhashay ama dhalashada maraykanka qaatay. Hadii waalidka dhalashad haystaa uu yahay aabaha, isla markaana ayna isku mehersanayn hooyada ilmaha dhashay, la tasho qareen kuwa laanta socdaalka ah.
Waalidka dhalashada haysta ee laga hadlayaa waa waalidka ilmaha dhalay ee uu dhiigiisii yahay ama waalid si sharci ah ula wareegay mas’uuliyada ilmaha oo soo korsaday. Xaasku sharciga waalidka lagu qaato uma qaadi karto ilmaha ay ninkeeda naag kale u dhashay sidoo kale ninkuna uma qaadi karo ilmaha ay xaaskiisu nin kale u dhashay. Hadii aad dhalshada u raadinaysid ilma aad soo korsatay qareen la tasho waayo waxaa jira shuruuc gaar ah oo arintaa u degan.
Sidoo kale waa in waalidka dhalashada haysta iyo waalidka kale ay ilmaha mas’uul ka wada yihiin ama waalidka dhalashada haysta keligii mas’uuliyada ilmaha leeyahay.
Hadii dhamaan arimahaasi sidaa u dhacaan, ilmahaagu shuruud la’aan ayuu dhalashada Maraykanka haystaa. Laakii waa inaad cadaynta dhaalashada u soo qaadid ilmahaaga. Waxaad samayn kartaa inaad u soo qaadid warqadda dhalashda ama dal-ku-galka (passport) buuga ah ama dal-ku-galka (passport). kaarka ah.
Ogow: Hadii “ilmuhu” dhashay wixii ka horeeyay bishii Febraayo 27, 1983, waxaa laga yaabaa inay jiraan sharciyo kale oo qabanayaan. Sidaa darteed waxaad la tashataa qareen kuwa laanta socdaalka ah.
Ilmahaygu wuxuu haystaa dhalashada maraykanka maxay yihiin aqoonsiyada ay tahay in aan u dalbo?
Waxaa wanaagsan inaad ilmahaaga u dalabtid dal-ku-galka (passport) iyo warqadda dhalashda. Tani waxay ka caawin kartaa ilmahaaga sidii uuna mustaqbalka wax dhib ah ula kulmeen. Laakiin kuma khasbanid inaad labadaba u dalabtid.
Waqadda dhalashada ee ay bixiso Wasaaradda arimaha Gudaha iyo amnigu weligeed ma dhacayso taariikh ay ku dhacdana ma laha. Wayna u shaqaynaysaa inta ilmahaagu nool yahay. Laakiin ilmahaagu wadanka banaankiisa uguma safri karo. Dhinaca kharashka dalbashada warqadda dhalashada ayaa aad uga qaalisan baasaboorka.
Hadii dakhligaagu hoseeyo waxaad buuxsan kartaa foom aad ku codsanaysid in lagaa cafiyo kharashka aad ku dalbanaysid warqadda dhalashada. Waxaa laga yaabaa inay adkaato in lagaa cafiyo kharashka aad ku dalbanaysid warqadda dhalashada.
Ogow: Waxaa laga yaabaa in mar walba aanay suurtogal ahayn in kharashka lagaa cafiyo . La xiriir hay’adda ama barta internetka ka fiiri inay suurtogal tahay inaad kharash cafin waydiisan kartid iyo inkale.
In laguu soo diro warqadda dhalashadu Waxay qaadataa ugu yaraan mudo 6 bilood ah, inta badana mudadu intaa way ka badan tahay.
Dal-ku-galka (passport) ay Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Maraykanku siiso caruurta da’doodu ka yar tahay 16 sano wuxuu ku dhacaa mudo 5 sano dadka intooda kalana baasaboorkoodu wuxuu ku dhacaa mudo 10 sano ah. Waana in baasaboorka la cusboonaysiiyo markuu dhaco.
Baasaboorka dalbashadiisa ayaa ka raqiisan, dalbashada warqadda dhalashada. Kharashka dalbashada baasaboorka, marnaba lagaama cafinayo. Inaad baasaboorka heshid waxay kugu qaadanaysaa mudo 6 usbuuc ah ama ka yar.
Ilmahaagu wuu ku safri karaa baasaboorka.
Dal-ku-galka (passport) kaararka ah waxaad ugu safri kartaa wadamada Maraykanka la leh xuduuda dhulka ah ama badda, laakiin safar diyaarad la raacayo oo wadanka dibadiisa loo baxayo uma isticmaali kartid baasaboorka kaarka ah.
Baasaboorka buuga ah meesha aad doonto ayaad ugu safri kartaa.
Dalbashada warqadda dhalashada (N-600)
Hadii aad tahay qof waalid ah oo haysta dhalashada Maraykanka, caruur aan qaan gaadhina kuu joogaan caruutaada waad u dalbi kartaa warqadda dhalashada. Waxaad u baahan tahay inaad buuxisid foomka la yiraahdo N-600 si’aad caruurta ugu dalabtid warqadda dhalashada. Hadii ilmahaagu da’doodu ka wayn tahay 18 sano waa inay iyagu foomka saxiixaan.
Hadii aad tahay ilmo ay dhaleen waalid dhalashada Maraykanka haystaan, adiga laftaada ayaa buuxsan kara foomka N-600.
Xageen ka heli karaa foomka N-600?
1. Foomka N-600 waxaad ka helaysaa barta internetka waxaanad ka gashaa halkan www.uscis.gov/n-600, AMA waxaad wacdaa hay’adda Maraykanka ugu qaabilsan adeegyada warqadda dhalashada iyo arimaha socdaalka(USCIS) halkan ka wac 1(800) 375-5283. (TDD0 sidoo kale dadka maqalka wax ka qabaa waxay wacayaan lambarkan 1(800) 767-1833.
2. Foomka buuxi adigoo ku buuxinaya macluumaadka shakhsiga ah ee ilmahaaga, sida Meesha uu ku dhashay, da’diisa, sharciga uu haystaa nooca uu yahay, cinwaanka uu degan yahay iyo macluumaadka waalidka.
3. Foomka aad soo diraysid waa inaad soo raacisid waxyaalahan soo socda:
Lacag dhan $ 1,170 oo ah kharashkii diiwaan gelinta oo aad ka soo dhigtid Jeeg ama jeega idman (money order) waxaanad ku soo qoraysaa “U.S. Department of Homeland Security”. Hadii dakhligaagu hooseeyo buuxi foomka I-912 si aad u codsatid in lagaa cafiyo kharashka diiwaan gelinta. Foomkan waxad ka helaysaa barta internetka waxaanad ka geli kartaa halkan www.uscis.gov/i-912. Hadii codsigaa la aqbalo uma baahnid inaad wax lacag ah bixisid.
Waxaad soo raacisaa 2 sawir oo dhowaan laga qaaday ilmahaaga oo nooca dal-ku-galka ah (passport) loogu talagalay ah. Waxaa jira shuruudo go’an oo laga doonayo inay buuxiyaan nooca sawirada ee dal-ku-galka ah (passport) loogu talagalay. Waa inaad hubisid in qofka sawirada qaadayaa yahay qof yaqaana sida loo qaado sawirada noocan ah. Barta internetka ee hay’adda socdaalka (USCIS) waxaad ka gashaa halkan www.uscis.gov waxaad halkan ka helaysaa qayb ka hadlaysa macluumaad ku saabsan sawirada baasaboorada.
Sawir aad ka qaaday kaarka deganaanshaha rasmiga ah ee ilmahaaga
Sawir aad ka qaaday warqadii dhalashada ee ilmahaaga.
Cadayn tusaysa inaad adigu dhalashada Maraykanka haysatid sida warqadda dhalashada ama dal-ku-galka ah (passport).
Cadayn tusaysa inaad ilmaha waalidkii tahay isla markaana kula noolyahay ama kula noolaan jiray. Tusaale: aqoonsiyada ama cadaymaha aad soo dirikatid:
amar maxkamadeed oo cadaynaya cida ilmuhu la noolaanayo.
Heshiisyadii aad guryaha ku kiraysatay
canshuurtii aad xaraysay
Warbixinta xafiiska gargaarka dadweynaha, iwm.
Cadayn tusaysa inaad si sharci ah ilmahaaga mas’uul uga tahay ama uga ahaan jirtay. Tusaale: aqoonsiyada ama cadaymaha aad soo dirikatid:
amaro maxkamadeed oo ah cida ilmuhu la noolaanayo
amarka furiinka maxkamada
warqadda meherka hadii aad is qabtaan ama is qabi jirteen, waalidka kale ee ilmaha wada dhasheen.
4. Cinwaankan ku soo dir:
Maxaa dhacaya hadaanan haynin qaar ka mid aqoonsiyada iyo cadaymaha la raacinayo foomka N-600?
Hadii aadan sawir ka hayn kaarka deganaanshaha rasmiga ah ee ilmahaaga, waxaad raadisaa inay jirto hay’ad hada ka hor sawir ka qaaday kaadhka, sida, iskuul, xafiiska gargaarka dadwaynaha, qareen, ama goob shaqo.
Hadii aad meelahaas oo dhan ka waydid sawirka kaarka, ilmahaagu wuxuu laanta socdaalka ka codsan karaa inay sawirka kaarkiisa u soo diraan. Markaa si’aad u codsatid sawirka kaarka waxaad buuxisaa foomka la yiraa codsiga xorta ah ee macluumaadka (FOIA), Foomka numberkiisu yahay G-639. Si’aad u heshid foomka FOIA waxaad booqataa barta internetka ee www.uscis.gov/g-639. Waxaa laga yaabaa inay dhawr bilood qaadato in laguu soo jawaabo, sidoo kale waxaa laga yaabaa in macluumaadka laguugu soo diro cajalad (CD) ah.
Sidoo kale waxaad codsan kartaa in kaar cusub laguu soo diro. Si’aad kaar cusub u codsatid waxaad buuxisaa foomka la yiraa I-90 si laguugu soo diro kaar deganaanshaha rasmiga ah. Waxaa lagaa doonayaa inaad bixisid lacag dhan $540 ama waxaad codsataa in kharashka dalbashada lagaa cafiyo. Akhri xogtan aruursan ee Bedelida Kaarkaaga Deganaha Rasmiga ah Bedelida ama Cusboonaysiinta Kaarkaaga Deganaanshaha Rasmiga ah (“Green Card”)
Hadii aad waydid sawirkii warqadda dhalashada ee ilmahaaga waxaad u baahan tahay in 2 qof oo goob joog ahaa markii ilmahaagu dhashay uu midwaliba kuu qoro warqad uu ku cadaynayo inuu goob joog ahaa dhalashada ilmahagaa adiguna aad tahay waalidka ilmaha dhalay.
Qofka warqada markhaatiga dhalashada kuu qorayaa waa inuu ku qoro warqada macluumaad faahfaahsan oo shakhsiyadiisa ku saabsan sida, magaciisa, cinwaanka uu degan yahay, nooca uu yahay sharciga uu haystaa iwm. Sidoo kale waa inay qoraan ilmaha magaciisa oo sedexan iyo waalidiintiisa magacyadooda, taariikhda dhalashada ee ilmaha iyo sida ay ku ogaadeen ilmahaaga iyo dhalashadiisa. Sidaa si la mid ah hadii labada waalid ee ilmaha dhalay ay is qabaan laakiin ayna haysan warqadda meherka, markhaatiyadu waa inay qoraalkooda ku daraan in labada waalid is qabaan.
Warqadan markhaatiga ah waxaa la rabaa in lagu saxiixo markhaati sharciyaysan oo nootaayo haysta hortiisa kadibna waa inuu nootayadda ku dhuftaa.
Hadii ay kaa luntay sawirkii warqadda dhalshadu ee Maraykanku, si’aad u heshid cadayn tusaysa warqadaada dhalashada waxaad laanta socdaalka ka dalban kartaa inay kuu soo diraan diiwaankaaga yaala laanta socdaalka waxaanad buuxinaysaa foomka la yiraahdo FOIA (maacluumaadka foomkuna kor ayuu ku qoran yahay).
Ama waxaad soo buuxin kartaa foomka N-565, loogu talo galay dib u cusboonaysiinta warqadda dhalashada iyo aqoonsiyada kale ee dhalashada Maraykanka. Foomka waxaad ka helaysaa halkan www.uscis.gov/n-565. Si aad u codsatid in warqadda dhalashada Maraykanka laguu soo diro waxaa lagaa doonayaa inaad bixisid lacag dhan $555, ama waxaad codsataa in lacagta lagaa cafiyo.
Ogow: Hadii ay da’daadu 18 sano ka wayn tahay oo aad adigu shakhsiyan dalbanaysid, isla markaana ay waalidiintaa oo haysta warqadda dhalashada Maraykanka ay kuu diidaan inay ku siiyaan sawirka warqadooda dhalashada waa inaad qareen wacdid. Qareenka ayaa kaa caaawinkara inuu amar maxkamadeed sawirka warqadda kaagaga soo qaado.
Waxaa laga yaabaa inaad buuxin kartid foomka N-600 xataa hadii aad waydid kaarkii deganaanshaha rasmiga ahaa ee ilmaha ama warqadaadii dhalashada ee Maraykanka (U.S.). Macluumaadkan waxaa laga helayaa kaydka Wasaaradda Amiga ee wadanka Maraykanka (U.S.). LAAKIIN codsigaaga way diidi karaan hadaadan raacin sharciyada iyo aqoonsiyada loo baahan yahay sidaa darteed waa inaad dirtid hadii aad heli kartid.
Yaan wacayaa hadii aan weli Caawimo u baahnahay?
Arrive Ministries 612-798-4332
Immigrant Law Center of MN 1-800-223-1368
International Institute 651-647-0191
Lutheran Social Services 612-879-5258
Minnesota Council of Churches (612) 874-8605
Park Avenue Walk-in Legal Clinic 3400 Park Avenue S, Minneapolis. Maalin walba oo Khamiis ah ka hel talo qareen 3-5 galabnimo
U Dalbida Dal-ku-Gal (Passport) Ilmahaaga
Muhiim ma aha inaad adigu dhalashada Maraykanka haysatid marka aad ilmahaaga baasabborka u dalbaysid. Laakiin maadaama oodan adigu haysan dhalashada Maraykanka waxaa lagaa doonayaa inaad keentid cadayn muujinaysa in waalidka kale eed ilmaha wada dhasheen uu haysto dhalashada Maraykanka (U.S.). Habka loo marayo dalbashada baasaboorka buuga ah iyo baasaboorka karaka ahi waa isku mid. Laaakiin kharshka lagu dalbanayo ayaa kala badan. Baasaboorka caruurta da’doodu ka yar tahay16 sano wuxuu ku dhacayaa mudo 5 sano ah. Laakiin haday da’daadu tahay 16 jir ama aad ka wayn tahay baasaboorkaagu wuxuu shaqaynayaa mudo 10 sano ah.
Sideen ilmahayga baasaboorka ugu dalbaa?
1. Booqo bogan: http://travel.state.gov/content/travel/en/passports.html.
Guji halkan “Waxaan u baahnahay baasaboor” kadibna dooro da’da qofka aad u dalbaysid
2. Halkan ayaad ka helaysaa foomka Form DS-11: Application for a U.S. Passport. Waxaad kala doorataa inaad barta internetka ka buuxisid iyo inaad foomka daabacatid ood gacanta ku buuxisid (PDF). Hadii aad barta internetka ka buuxisid waxaad maraysaa talaabooyin isku xig xiga oo midiba mida kale kuu gudbinayso.
Ama waxaad tegi kartaa xafiiska foomamka laga soo qaato oo aad ka soo qaadan kartaa. Sidoo kale xafiisya badan oo kuwa boostada Maraykanka ah, xafiiska degmada aad degan tahay, iyo xafiisyadda gobolka ee laysanka gaariga lagu wado bixiya dhamaan meelahani way bixiyaan adeega baasaboorada. Si’aad u ogaatid goobta kuugu dhow waxaad booqataa bartan internetka, http://iafdb.travel.state.gov ama waxaad wacdaa 1 (877) 487-2778.
3. Foomka waxaad ku buuxisaa macluumaadka ilmahaaga sida, meesha uu ku dhashay, da’diisa, macluumaadka waalidka iyo cinwaanka uu degan yahay.
4. Waxyaalahan sii qaado markaad u socotid xarunta ama goobta aad foomka ku buuxinaysid
Cadayn muujinaysa in ilmaha uu waalidkii dhalashada Maraykanka u qaaday.
Oo ay la socdaan DHAMAAN aqoonsiyada iyo cadaymaha loo baahan yahay marka la buuxinayo foomka N-600. Waxyaabahan hoos ku qoran ayaa cadayn noqon kara:
Sawirka karaka degenaanshaha rasmiga ah ee ilmahaaga.
Sawirka warqadda dhalashada ee ilmahaaga hadii aad haysid
Cadayn muujinaysa in adiga (ama waalidka kale ee ilmahu) haysataan dhalashada Maraykanka sida warqadda dhalashada.
Cadayn muujinaysa in waalidka dhalashada Maraykanka haystaa uu yahay waalidki ilmaha dhalay, sidoo kale inuu haysto cadayn ah in ilmuhu la noolyahay ama la noolaan jiray, isla markaana waalid kaasi haysto cadayn ah inuu si sharci ah isagu ilmaha mas’uul uga yahay.
Ogow: Hadii ilmuhu mar hore warqadda dhalashada ku qaatay nidaamka N-600 aqoonsigaa keliya ayaa ku filan marka aad dal-ku-galka (passport) u dalbanaysid.
Aqoonsiyo Cusub ayaa laga rabaa labada waalid iyo ilmahaba hadii wax aqoonsi ah loo baahdo [akhri qoraalka hoose “Sidee ayay ilmahayga da’diisu saamayn ugu yeelan kartaa dalbashada dal-ku-galka (passport)?”]. Aqoonsi (I.D) waxaa noqon kara laysanka gaariga lagu wado, warqadda dhalashada Maraykanka ama aqoonsiyo kale oo ay dawladdu bixisay.
Kharashka Dalbashada [akhri qoraalka hoose “Sidee ayay ilmahayga da’diisu saamayn ugu yeelan kartaa dalbashada dal-ku-galka (passport)?”
1 sawir oo ah nooca dal-ku-galka (passport). loogu talagalay oo ilmahaaga laga qaaday. Sawirka baasaboorka loogu talagalay waa inuu buuxiyaa shuruudo go’an. Sidaa darteed waa inaad hubisid in qofka sawirka qadayaa yaqaano sida loo qaado.Barta interrnetka ee laanta socdaalka ee Marayka ( USCIS) halkan ka gal www.uscis.gov waxay leedahay qayb ka hadlaysa sawirka dal-ku-galka (passport).
Sidee ayay ilmahayga da’diisu saamayn ugu yeelanaysaa dalbashada Dal-ku-Galka (Passport)?
Caruurta ay da’doodu tahay 18 sano ama ka wayni iyaga ayaa kiligood dalban kara, iyagoo raacaya talaabooyinka aan kor ku soo sheegnay. Way dalban karaan hadii ay dhalashada Maraykanka ku qaateen waalidkood ka hor intii aanay da’doodu gaarin 18 sano. Kharashka lagu dalbanayo baasaboorka buuga ahi waa $145 baasaboorka kaarka ahna waa $65. Toban sano ka dib ayayna dhacayaan.
Caruurta ay da’doodu tahay 16 ama 17 sano waxay u baahan yihiin inay ogolaansho ka helaan waalidkood ama dadka mas’uulka ka ah si’ay u dalbadaan baasaboorka marka ay dalbanayaana waa inay xafiiska laga dalbado tagaan. Sidoo kale waa inay xafiiska baasaboorada keenaan qoraal ogolaansho ah oo uu qoray labadooda waalid mid kood ama qofka mas’uulka ka ahi waxaa kaloo laga rabaa inay keenaan sawirka aqoonsiga (I.D.) waalidka iyo aqoonsigooda (I.D). AMA waxaa raaci kara waalidka ama qofka mas’uulka ka ah iyagoo aqoonsigooda wata (I.D). dal-ku-galka (passport) buuga ah qiimihiisu waa $145 baasaboorka kaarka ahna waa $65. Toban sano ka dib ayayna dhacayaan.
Ilmaha ay da’diisu ka yar tahay 16 sano marka uu baasaboorka dalbanayo waa inuu xafiiska tagaa oo ka dalbadaa. Adiga iyo dhamaan waalidka ilmaha ama dadka mas’uulka ka ahi waa inay raacaan oo ay xafiiska tagaan. Adiga iyo waalidka kale ama qofka mas’uulka ka ahi waa inay soo qaataan aqoosigooda (I.D). Baasaboorka buuga ah qiimihiisu waa $115. Dal-ku-galka (passport) kaarka ahna waa $50. Dal-ku-Galka (Passport) buuga ah ama kan kaarka ahi waxay shaqaynayaan shan sano keliya.
Maxaa dhacaya hadii labada waalid midkood aanu tegi Karin xafiiska Dal-ku-Galka (Passport) laga dalbanayo?
Hadii adiga ama waalidka kale aanu ilmaha u raaci Karin xafiiska baasaboorada laga dalbado waa in waalidka aan goobta tegayn uu buuxiyo foomkan Form DS-3053 Statement of Consent: Issuance of a Passport to a Minor Under Age 16. Foomkani waa ogolaansho aad ku ogolaanayso in ilmahaaga aan qaan gaadhka ahayni baasaboorka dalbado adigoon goob joog ahayn.
Foomka DS-3053 waxaad ka helaysaa barta internetka ee http://travel.state.gov/content/travel/en/passports.html
Hoos u jiid ilaa aad gaadhid meesha oranaysa “Waxaan rabaa foom”
Guji halkan “Soo dejiso oo daabaco ama halkiisa ku buuxi foomka”
Hoos u jiid ilaa aad gaartid meesha oranaysa “Foomamka loogu talo galay xaaladaha khaaska ah”
Guji halkan “Ogolaansho qoraal ah: Oo aad ku ogolaanaysid in ilmaha Dal-ku-galka (passport) la siiyo adigoon la socon (DS-3053 warbixin ku saabsan xaalad khaas ah oo qoyska haysata)”
Sidoo kale foomka DS-3053 waxaad ka heli kartaa xafiiska laga soo qaato foomamka baasaboorada. Marka foomka la buuxiyo waa in lagu saxiixo markhaati sharciyaysan oo nootaayo haysta hortiisa. Waxaa kale oo lagaa doonayaa inaad haysatid sawir labada dhinacba ah oo laga qaaday waalidka aan kula socon aqoonsiyadiisa. Ka dibna foomk aad buuxisay iyo sawirada aqoonsiyadaba waxaad gaysaa xafiiska dal-ku-galada (passport) laga dalbado.
OGOW: Hadii labada walid midkood dhintay, waxaad keentaa warqaddii cadaynta dhimashada ama qoraal markhaati ah nootaayo leh oo xaqiijinaya geerida.
Hadii aad tahay waalidka keliya ee ilmaha mas’uulka ka ah waxaad keentaa amar maxkamadeed oo cadaynaya inaad keligaa ilmaha mas’uuliyadiisa leedahay. Hadii aad tahay hooyada ilmaha dhashay isla markaana ay daan is qabin aabihii ilmaha dhalay, waxaad arintaa ku xaqiijin kartaa inaad keentid warqadda dhalashada ee ilmaha oo magaca hooyada keliya ahi ku qoran yahay. Hadii aadan haysan dhamaan waxyaalahaas oo dhan waxaad buuxin kartaa foomka DS-3053 si’aad isugu daydid inaad xaaladaada sharaxdid.
Maxaa dhacaya hadii aanan keligay lahayn mas’uuliyada ilmaha aniga iyo waalidka kalana dhib na dhextaalo oo aanan saxiix ka heli Karin?
Hadii aadan mas’uuliyada ilmaha keligaa lahayn waalidka kalana saxiixi Karin ama diido inuu saxiixo foomka DS-3053 waxaad siinaysaa warbixin qoraal ah oo nootaayo leh waxaanad buuxinaysaa foomkan Form DS-5525: Statement of Exigent/Special Family Circumstances – For Issuance of Passport to a Minor Under Age 16 Warbixintaas oo sharaxaysa sababta waalidka kale loo waayay. Tusaale Sababaha waalidka kale loo waayay ee uuna u saxiixayn foomka waxaa ka mid noqon kara sida: Maxakad ayaa xukuntay in la’idin kala badbaadiyo oo idin kala fogaysay, ama maxkamad ayaa xukuntay inaydaan wada xiriiri Karin ama inaadan garanayn meesha waalidka kale laga helo.
Foomka DS-5525 waxaad ka helaysaa bartan internetka halakn ka gal: http://travel.state.gov/content/travel/en/passports.html.
Hoos u jiid ilaa aad gaartid meesha oranaysa “Waxaan rabaa foom”
Guji halkan “Soo dejiso oo daabaco ama halkiisa ku buuxi foomka oranaya foomkayga”
Hoos u jiid ilaa aad gaartid meesha oranaysa “foomamka xaaladaha khaaska ah loogu talo galay”
Guji halkan “Warbixin ku saabsan xaalad khaas ah oo qoyska haysata (DS-5525)”
LAAKIIN Hay’adda foomamka kaa qabanaysa ayaa go’aaminaysa inay codsigaaga aqbalaan iyo in kale. Intaa waxaa dheer, ma jirto cid kuu balan qaadi karta in sharaxaada aad bixisay la aqbalayo. Waxaa dhici karta in hal foom ood gaysay laba xafiis oo kala duwan oo kuwa foomamka qabta ah inay laba go’aan oo kala duwan ka kala qaataan isla halkii foom. Sida ugu wanaagsan eed kaga hortegi kartid inaad saxiixa waalidka kale u baahataa waa inaad maxkamada arimaha qoyska ka codsatid inay kuu xukunto inaad keligaa ilmaha mas’uuliyadiisa leedahay kadibna maxkamadu kuu xukunto
Maxaa dhacaya hadaanan haysan qaar ka mid ah aqoonsiyadan iyo sharciyadan la’iiga baahan yahay si’aan baasaboorka u dalbado?
Hadii aadan heli Karin sawirka warqadda dhalashada ee ilmahaaga waxaad raadisaa qof kula joogay markuu ilmahaagu dhashay foomkana ha kuu buuxiyo Form DS-10 Affidavit of Birth.
Raadi foomkan DS-10 waxaad ka helaysaa barta intenetka https://eforms.state.gov/
Guji halkan “DS-0010”
Sidoo kale, waxaa lagaa doonayaa inaad soo qaadatid wax kasta oo aqoonsi ah oo aad soo qaadan kartid kuwaas oo ay ku qoran yihiin magaca ilmaha, taariikhda uu dhalashay, iyo shay ay labada waalid magacyadoodu ku wada qoranyihiin. Waxyaabahaas waxay noqon karaan sida:
warqadda kaniisadu bixiso
warqaadda dhalashada ee isbitaalku bixiyo
Qaybo wargayska ka mid ah oo la soo gooyay
diiwaanadii iskuuladii u hooreeyay ee ilmaha la qoray
diiwaanka kitaabka qoysku kala dhaxo
diiwaan dhakhtarka ee tusinaya dawayntii ilamaha markuu dhashay ka dib loo sameeyay
Sidoo kale waxaa lagaa doonayaa in dadka waawayni aqoonsiyadooda soo qaataan (I.D). Aqoonsiyadaas waxaa noqon kara waxyaalahan soo socda:
laysinka gaariga lagu wado oo shaqaynaya
aqoonsiga ay dawladdu bixisay
dhalashada maraykanka ama warqaddii dhalashada Maraykanka ee lagu siiyay
kaarka deganaanshaha rasmiga ah
Hadii aadan haysan wax ka mid ah dhamaan aqoonsiyadaas (I.D.), waxaa Khasab ah inaad haysatid ah wax kale oo lagugu aqoonsado IYO markhaatiyo ku cadeeya qofka aad tahay. Qofkaasi waa inuu ku yaqaanay 2 sano, isla maraakana yahay qof haysta dhalashada Maraykan ama uu haysto kaarka deganaanshaha rasmiga ah, haystana aqoonsiyo shaqaynaya buuxiyana “foomka DS-71 oo ah qoraal markhaati ah oo nootaayo leh uu ku cadaynayo qofka aad tahay “kuna buuxiyo sarkaalka xarunta dal-ku-galka (passport) hortiisa. Foomka DS-71 kama helaysid barta internetka. Qofka markhaatiga kuu ahi waa inuu kuu raaco xafiiska dal-ku-galka (passport). Foomamku xafiiska ayay yaalaan.
Hadii aadan haynin kaarkii deganaanshaha rasmiga ah ee ilmahaaga ama warqadii dhalashada Maraykanka ee waalidka akhri qoraalka kore ee (bogga 4aad) ama hoos “Maxaa dhacaya hadaanan haynin qaar ka mid ah aqoonsiyada la iiga baahan yahay foomka N-600?
Maxaan sameeyaa hadaan su’aalo kale qabo ama dhibo kale iga haystaan Dal-ku-Galka (Passport) ilmahayga?
Waxaad wacdaa xafiiska hay’adda baasaboorada ee Minneapolis hadii aad dhib la kulantid ama laguu soo diiday baasaboorka. Sidoo kale wac xafiiska hay’adda dal-ku-galka (passport) hadii aad u aragtid in kiiskaagu yahay mid isku murugsan doonaysidna inaad ka hor tagtid inaad wax dhibaato ah kala kulantid xafiiska degaanka ee foomka lagu buuxiyo. Waxay xirfad dheeraad ah u leeyihiin sidii dal-ku-galka (passport) si (degdeg ah) laguugu siin lahaa. Markaad wacdid fariinta meesha lagu duubay waxay ku oran doontaa si laguugu dedejiyo baasaboorka waa inaad tahay qof safar dedeg ah u baxaya. Hadii aadan degdeg u baxayna balan samayso. Kharashka adeega wuxuu noqonayaa qiimihii dal-ku-galka (passport) caadiga ah lagaa qaadi lahaa oo lagu daray $60 oo dheeraad ah.
Hay’adda dal-ku-galka (passport) ee Minneapolis: 1 (877) 487-2778 (Minneapolis Passport Agency)
212 Third Ave. S.